‘चौरमा दिवाभोज’ विश्वकला-- रमेश खनाल
– एद्धार मानेका चित्र “चउरमा दिवाभोज”The Luncheon on the Grass Le Dejevner Sur L'her be नामक एक प्रसिद्ध अति विवादित (२.०८ मि.×२.६४ मि.) साइजको इ.सं. १९६२ र १९६३ का बीच बनाइएको एक तेल चित्र हो ।
हाल यो चित्र पेरिसकोMusee dorsay कला संग्राहलयमा संकलन गरिएको छ । यो एक यथार्थवादी चित्र हो । चित्रलाई पनि पेरिसको सालोन जुरीले १८६३ को यस राष्ट्रिय कला प्रदर्शनीमा अस्विकृत गरेका थिए ।
मानेले प्रस्तुत चित्रमा एक महिलालाई दुई पुरुषका बीच पूर्ण नाङ्गो देखाएका छन् । त्यसबेलाको समाजले मानेको निरवस्त्र चित्र अश्लिल ठान्दै अस्विकृत गरेको थियो । मानेको सो चित्र वास्तवमै एक विद्रोह थियो । सालोनका जुरीले मानेको सो चित्र अस्विकृत गरेकै संदर्भमा जोला नाम गरेको लेखकले मानेको प्रतिवाद गर्दै लेखेका छन् ः–
“लुभ्रभित्र स्ववस्त्र र विवस्त्र आकृतिहरुलाई सँगै राखेर संयोजन गरिएका यस्ता पचास भन्दा बढि चित्र टांगिएका छन् तर ती चित्र हेरेर कोही किन आक्रोसित हुँदैनन् । माने जस्ता विश्लेषणवादी कलाकारहरुका लागि विषयले गौण महत्व राख्दछ र दर्शकका लागि भने विषय नै सम्पूर्ण हुन्छ ।” अतः निश्चित रुपमा “चउरमा दिवाभोज” की निर्वस्त्र महिला आकृति कलाकारहरुका लागि केवल मांसल स्वरुप चित्रणका लागि साधन मात्र रहेको छ । संक्षेपमा भन्नुपर्दा आकृतिहरुको यो सानो समूहलाई कलाकारले आफूभित्र निहित गर्दै सरल प्राकृतिक परिवेशमा अभिब्यक्त गरिदिएका छन् । चित्ताकर्षक छन् । (स्रोतः पाश्चात्य कला– नविन्द्रमान राजभण्डारी ) ।
मानेको उक्त चित्र बाट अन्य कलाकारहरु पनि प्रेरित भएका थिए । ती कलाकारहरुमा पिकासोलेLes Demoiselles d'Avignon (1907) जस्तो चित्र बनाए । त्यसैगरि Paul Gauguin ले Where do we come from ? Who are we? Where are we going ? नामक थाहिटीयन महिला जन्य चित्र बनाए । Paul Cezanne n] Le Dejeuner Sur I'herbe नामक चित्र बनाए । James Tissot ले La partie Carree नामक चित्र बनाए । मानेले चउरमा दिवाभोज नामक चित्र स्टुडियो मा नै बनाएका हुन् । उक्त चित्रमा युजेन माने (Eugene manet) तथा फर्डिनान्ड लेनहोक Eugene manet द्धयले पुरुष मोडल बसेका हुन् । निर्वसना स्त्री मोडल भिक्टोराँ म्युरँ Victorine Murent हुन् । उनी एक प्रसिद्ध मोडल हुन् ।
यस चित्रको अघिल्लो भागमा एउटा बास्केट भित्र फलफूल र पाउरोटी देखिन्छ । जसलाई मानेको स्टिल लाईफ पनि भनिन्छ । यस चित्रमा दर्शक तर्फ हेरिरहेकी निर्वस्त्र युवतीले दाहिने हातको कुईनो घुँडामा टेकेर चिउँडो हामी तर्फ फर्काएकी छन् । दुई पुरुष मध्ये टोपी लगाएको पुरुषले दाहिने हात अगाडि तेर्साएर कुनै गम्भिर विषयमा वार्ता गरिररहेका देखिन्छ । निरवस्त्र युवतिको उपस्थिति रत्तिभर मतलव नराख्दै टोपि नलगाएको पुरुष पनि गंभिर भएर कुरा सुनिरहेको देखिन्छ । निरवस्त्र युवती र दुई पुरुषको अलिक पर एक युवती निहुरिएर पानीमा केही खाेिजरहेकी देखिन्छ । मोनेले किन हो यस चित्रमा दोस्रो युवतीको फिगर ठूलो देखाएका छन् । अर्थात दुरान्तरका हिसावले ती युवतीको फिगर सानो हुनुपथ्र्यो । तर त्यहाँ त्यस्तो छैन । तैपनि निलो आकाशको दुरान्तर मिलेको छैन । कतै काम अधुरो नै लाग्छ । संभवत स्टुडियोमा बनाएको चित्र भएकोले वस्तुहरुको छायाँ त्यति देखिदँैन । प्रकाशलाई मात्र विशेष ध्यान दिने गरिन्छ स्टुडियोमा ।
प्रचलित प्रज्ञिक परम्परालाई ताडेर मोनेले खस्रा तुलिका धातुहरु प्रयोग गरेका छन् । जबकी त्यसबेला चिल्लो रंग लगाएका चित्रहरु मात्र हेर्ने आँखामा बानी परिसकेको थियो । अर्को महत्वपूर्ण कुरा सत्रौ शताब्दीमा काराभाजो लगायत अन्य बरोक शैलीका कलाकारहरुले सुरु गरेको कृतिम प्रकाशको प्रभाव देखाउने पद्धतिलाई मानेले त्यागिदिएका थिए ।
“Sense Of propriety though Emile Zolaacontemporatry of Manet's argued that this was not uncommon in painting found in Louvre. Zola also felt that suchasection come from viewing art differently than ‘analytit' painters like Manet, who useapaintings subject asapretext to paint.” मानेको सो चित्रको मुल्यको २५०० फ्रेङक राखेका थिए । तर उक्त चित्रलाई प्रसिद्ध ओपेरा गाएक व्भJean Baptiste faure ले २६०० फ्रेङ्कमा किनेका थिए । भनिन्छ, माने जोर्जोन (Giorgione) को ‘एबकतयचब िअयलअभचतु नामक चित्र‘Pastoral concert' (1515) का Marcan tonio Raimondi sf Judgement of paris इनभ्रेगिग बाट प्रभावित भएका ठानिन्छ। मानेको सो चित्रमा मिश्रित विचारहरु पाईएका छन् । Odilon Redon Le capitaine pompilus, castangnary, Le Figaro, paul thore आदिले मोनेको सो चित्रमा मिश्रण विचार व्यक्त गरेका छन् । यसक्रममा अर्थर स्टिभिन्सले पेन्टिङले के भन्ने खोजेको हो वुझ्नै सकिन भनेका छन् । यसैगरि,Didier de Montchaux ले भने मैले “सो चित्र fairly seabrous पाए” भनेका छन् । जे, होस् मानेका सो चित्र व्यापक विरोधका बीच पनि प्रशिद्ध भएको छ ।
अस्लिल होइन, विद्रोहका रुपमा संसारले यो चित्रलाई हेरेका छन् ।